Vaovao - Taorian'ny hetsi-panoherana ara-poko dia niongana ireo sarivongana tany Etazonia
Manerana an'i Etazonia, ireo sarivongan'ireo mpitarika Confederate sy olo-manan-tantara hafa mifandraika amin'ny fanandevozana sy ny famonoana teratany Amerikanina dia noravana, nopotehina, nopotehina, nafindra toerana na nesorina taorian'ny hetsi-panoherana mifandraika amin'ny fahafatesan'i George Floyd, lehilahy mainty hoditra, tany amin'ny polisy. fitazomana ny 25 Mey any Minneapolis.
Tany New York, ny American Museum of Natural History dia nanambara tamin'ny Alahady fa hanala ny sarivongan'i Theodore Roosevelt, filoham-pirenena amerikana faha-26, teo ivelan'ny vavahady fidirana lehibe. Mampiseho an'i Roosevelt mitaingin-tsoavaly io sarivongana io, eo anilan'ny amerikana afrikanina sy tera-tany amerikana an-tongotra. Ny tranombakoka dia mbola tsy nilaza izay hataony amin'ilay sarivongana.
Any Houston, sarivongana Confederate roa amin'ny valan-javaboary no nesorina. Iray amin'ireo sarivongana ireo, ny Spirit of the Confederacy, sarivongana varahina misolo tena ny anjely mitondra sabatra sy rofia, dia nijoro tao amin'ny Park Sam Houston nandritra ny 100 taona mahery ary ankehitriny ao amin'ny trano fitehirizam-bokin'ny tanàna.
Nikarakara hamindra ilay sarivongana tao amin'ny Museum of American American American Culture ny tanàna.
Raha misy ny sasany miantso ary mandray andraikitra mba hialana amin'ny sarivongana Confederate, ny hafa kosa miaro azy ireo.
Tao Richmond, Virginia, nanjary ivon'ny fifandirana ny sarivongan'i General E. E. E. Confederate. Nangataka ny hanonganana ilay sarivongana ireo mpanao fihetsiketsehana, ary namoaka didy ny governora Virginia Ralph Northam mba hanaisotra izany.
Na izany aza, nosakanana ilay didy satria nisy andiana tompona fananana nametraka fitoriana tany amin'ny tribonaly federaly izay nilaza fa ny fanesorana ilay sarivongana dia hampihena ny fananana manodidina.
Ny mpitsara federaly Bradley Cavedo dia nanapa-kevitra ny herinandro lasa teo fa ny sarivongana dia fananan'ny olona mifototra amin'ny asa vita tamin'ny 1890. Namoaka didy mandrara ny fanjakana tsy handrava azy izy alohan'ny hamoahana didim-pitsarana farany.
Ny fandinihana natao tamin'ny taona 2016 nataon'ny Ivotoeran'ny lalàna momba ny fahantrana atsimo, fikambanana mpiaro ny ara-dalàna tsy miankina amin'ny fanjakana, dia nahitana fa mihoatra ny 1.500 ny marika Confederate ho an'ny daholobe manerana an'i Etazonia amin'ny endrika sarivongana, saina, takelam-panjakana, anaran'ireo sekoly, arabe, zaridaina, fialantsasatra sy toby miaramila, mifantoka any atsimo ny ankamaroany.
Ny isan'ny sarivongana sy tsangambato Confederate tamin'izay dia 700 mahery.
Hevitra tsy mitovy
Ny Fikambanam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny olona miloko, fikambanana miaro ny zon'olom-pirenena, dia nitaky ny fanesorana ireo tandindona Confederate teny amin'ny habakabaka sy ny governemanta nandritra ny taona maro. Na izany aza, misy ny fomba fijery samihafa ny fomba hiatrehana ireo vakoka ara-tantara.
"Sahiran-tsaina aho noho izany satria io no fanehoana ny tantarantsika, io no fanehoana an'izay noheverinay fa OK", hoy i Tony Brown, profesora mainty momba ny sosiolojia ary talen'ny Vondron'olom-pinoana sy fanavakavaham-bolon-koditra ao amin'ny Oniversite Rice. “Mandritra izany fotoana izany, mety misy ratra amin'ny fiaraha-monina isika, ary mieritreritra izahay fa tsy maninona intsony ary te-hanala ireo sary.”
Farany, nilaza i Brown fa te hahita ireo sarivongana hijanona izy.
“Matetika izahay te-hanadio ny tantarantsika. Matetika izahay te hiteny hoe tsy manavaka ny maha-olona antsika ny fanavakavaham-bolon-koditra, tsy ampahany amin'ny fananganana antsika, tsy an'ny soatoavintsika. Noho izany, rehefa manaisotra sarivongana ianao, dia manadio ny tantarantsika, ary nanomboka tamin'io fotoana io dia manjary mahatsapa ireo izay mamindra ny sarivongana fa nahavita ampy tsara izy ireo, ”hoy izy.
Ny tsy fanafoanana ny zavatra fa ny fanaovana zavatra hita maso miaraka amin'ny tontolon-kevitra dia ny fomba anaovanao ny olona hahatakatra ny halalin'ny fanavakavaham-bolonkoditra lalina, hoy hatrany i Brown.
“Ny volan'ny firenentsika dia vita amin'ny landihazo, ary ny volanay rehetra dia vita pirinty amin'ny lehilahy fotsy, ary ny sasany amin'izy ireo dia andevo. Rehefa mampiseho izany karazana porofo izany ianao, hoy ianao, miandrasa kely, mandoa zavatra amin'ny landy vita printy amin'ireo tompona andevo izahay. Avy eo dia hitanao fa lalina ny fanavakavaham-bolon-koditra, ”hoy izy.
James Douglas, mpampianatra lalàna ao amin'ny Texas Southern University ary filohan'ny toko Houston ao amin'ny NAACP, dia maniry ny hanala ireo sarivongana Confederate.
“Tsy misy ifandraisany amin'ny ady an-trano izy ireo. Natsangana ireo sarivongana hanomezam-boninahitra ny miaramila Confederate ary hampahafantatra ny Afrikanina Amerikanina fa voafehin'ny vahoaka fotsy hoditra. Natsangana izy ireo mba hampisehoana ny fahefan'ny fotsy hoditra amin'ny Afrikanina Amerikanina, "hoy izy.
Tapaka ny fanapaha-kevitra
Douglas koa dia mpitsikera ny fanapahan-kevitr'i Houston hamindra ny fanahin'ny sarivongana Confederacy ho any amin'ny tranombakoka.
“Ity sarivongana ity dia hanomezam-boninahitra ireo mahery fo niady ho an'ny zon'ny fanjakana, raha ny tena izy dia ireo niady mba hitazomana ny Afrikanina Amerikanina ho andevo. Heverinao ve fa misy olona manolo-kevitra ny hametraka sarivongana ao amin'ny Tranombakoka Holocaust izay nilaza fa natsangana ity sarivongana ity hanomezam-boninahitra ireo olona namono ny Jiosy tao amin'ny efitranon-tsolika? ” hoy izy nanontany.
Ny sarivongana sy ny fahatsiarovana dia natao hanomezam-boninahitra olona, ​​hoy i Douglas. Ny fametrahana azy ireo ao amin'ny tranombakoka afrikanina amerikana dia tsy manaisotra ny fanajana azy ireo.
Ho an'i Brown, ny famelana ireo sarivongana eo amin'ny toerany dia tsy manome voninahitra an'io olona io.
“Amiko, manondro ny andrim-panjakana io. Rehefa manana sarivongana Confederate ianao dia tsy hilaza na inona na inona momba ilay olona. Milaza zavatra momba ny mpitondra izy io. Milaza zavatra momba ny olona rehetra niara-nanao sonia an'io sarivongana io izy ireo, izay nilaza fa teo ilay sarivongana. Heveriko fa tsy te-hamafa izany tantara izany ianao, ”hoy izy.
Nilaza i Brown fa tokony handany fotoana bebe kokoa amin'ny fanisana ny olona ny amin'ny fomba "nanapahanay hevitra fa izy ireo no maherifonay hanombohana, hanombatombana ny fomba nanapahanay hevitra fa OK ireo sary ireo".
Ny hetsika Black Lives Matter dia manery an'i Amerika hamerina hijery ny lasa mihoatra ny sarivongana Confederate.
Ny HBO dia nanala vonjimaika ny sarimihetsika 1939 Gone with the Wind tamin'ny tolotra an-tserasera ny herinandro lasa teo ary mikasa ny hamerina ny horonantsary kilasika miaraka amin'ny adihevitra momba ny toe-javatra nisy teo amin'ny tantara izy. Voatsikera ny sarimihetsika noho ny fanomezany voninahitra ny fanandevozana.
Ary koa, tamin'ny herinandro lasa teo, nanambara i Quaker Oats Co fa manala ny sarin'ny vehivavy mainty hoditra iray avy amin'ny fonosana marika syrup mix mix sy siramamy pancake 130 taona izy ary manova ny anarany. Nanaraka izany ny Mars Inc. tamin'ny fanesorana ny sarinà mainty hoditra iray avy teo am-pamonosana ilay marika vary malaza an'i Dadatoa Ben's ary nilaza izy ireo fa homeny anarana izany.
Notsikeraina ireo marika roa ireo noho ny sarin'izy ireo stereotypical sy ny fampiasana haja mihaja izay taratry ny fotoana nampiasan'ny fotsy hoditra tatsimo hoe "nenitoany" na "dadatoany" satria tsy te hiteny amin'ny mainty hoditra hoe "Mr" na "Ramatoa" izy ireo.
Samy mahatsapa ny fihetsik'i HBO i Brown sy i Douglas, saingy samy hafa kosa ny fijerin'izy ireo ny fihetsiky ny orinasa roa misahana ny sakafo.
"Izany no zavatra mety tokony hatao," hoy i Douglas. “Nahazo orinasa lehibe izahay hahatsapa ny lesoka amin'ny fomban'izy ireo. Hoy izy ireo (nilaza), 'Te hiova izahay satria fantatray fa fanehoana ratsy ny Afrikana Amerikanina izany.' Fantatr'izy ireo izany ankehitriny ary noroahiny izy ireo. ”
Ho an'i Brown, ny hetsika dia fomba iray hafa hivarotan'ireo orinasa vokatra bebe kokoa.
Ny mpanohitra dia manandrana manongana ny sarivongan'i Andrew Jackson, filoham-pirenena amerikana teo aloha, tao amin'ny Lafayette Park manoloana ny Trano Fotsy nandritra ny fihetsiketsehana tsy fitoviana ara-poko tany Washington, DC, ny alatsinainy teo. JOSHUA ROBERTS / REUTERS